Blog Post တင်နည်း။ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
Blog Post တင်နည်း။
Posted by ရေအောက်မင်းသား on September 2, 2012 at 10:30pm
အခုကတော့ ... http://ning.com တွေနဲ့ မရင်းနှီး သေးတဲ့ Member အသစ်/ဟောင်း တွေ အတွက်ပါ...။ ပထမ ဦးစွာ ...
1. Title Bar မှာရှိတဲ့ ဘလောဂ့်များကိုနှိပ်လိုက်ရင် .. Blog Page ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ... အဲ့ဒီ ဘလော့ Page ရဲ့
ညာဘက် အပေါ်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ ADD ကို နှိပ်လိုက်ပါ...။ အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။
2. အဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရင် ... Blog တင်ရမဲ့နေရာကို ရောက်သွားပါမယ် ..
ဘလော့တင်ရမဲ့ ပုံစံအသေးစိတ်ကို ပုံလေးနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်..အောက်ပုံမှာကြည့်ပါ။
အပေါ်ပုံ အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံပြီ ဆိုရင် ..... .....
အောက်ဆုံးမှာ ရှိတဲ့ ပြန်ကြည့် ရန် ကို နှိပ်ပြီ မိမိတင်လိုက်သောပိုစ့်၏ သေသပ် သပ်ရပ်မှုကို ကြည့်နိုင်ပြီး....
ပိုစ့် တင်မယ် ကိုနှိပ်လိုက်ရင် တင်နိုင်ပါတယ်..။ သတိထားသင့်သော အချက်။
ယခုအောက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ထိုနေရာကို တွေ့ပါက ဘာမှ မပြောင်းလဲပဲ ထားပေးပါရန်။
မှတ်ချက် ၊ ၊ MMC တွင် ဘလော့ တင်ပါက မိမိ တင်သော ဘလော့ များအား တင်ပြီးပါက ချက်ချင်းမရနိုင်ပါ။
(MMC ADMIN GROUP မှ စည်းကမ်းချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ၊မရှိ ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီးမှ .. .. Blog Page ပေါ်
ဘလော့များရေးသားရင်း...မိမိ ဘလော့ အတွက် ဂုဏ်ယူမိကြပါစေ...........
Tags: နည်းပညာ Like7members like this
< Previous Post မှတ်ချက်လေး တစ်ခုဟာစာရေးသူအတွက် အားဆေးဖြစ်ပါတယ်
Comment by panmonnyal တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဘလော့ပို့စ်တွေကို စိစစ်တာဘယ်လောက်ကြာမှသိရတာလဲ စီစစ်နေတယ်ဆိုတာကော သိနိုင်သလား Comment by htut naung on March 4, 2013 at 8:58pm ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ Comment by ချမ်းဖြိုး on January 20, 2013 at 2:45pm အင်းအင်း စမ်းလိုက်ဦးမယ် မျက်နှာမငယ်တော့ဘူးပေါ့ ဒီလိုလေးတွေလုပ်ပေးတော့ ......
Comment by အိမ်ကြာဖြူ on January 19, 2013 at 5:19pm ဟုတ်-တင်ကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။
Comment by ချစ်သူလေး on December 15, 2012 at 6:10pm လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်.... Comment by ကောင်မလေး on October 17, 2012 at 11:43am မဒီလည်းလုပ်ကြည့်ဦးမှ Comment by naymyomin on September 28, 2012 at 5:22pm စမ်းလိုက်ဦးမယ် Comment by layeiwai2010@gmail.com on September 27, 2012 at 11:53am Friends18.com For you Scraps
ကျေးဇူးနော် Comment by အပြုံးပန်း on September 22, 2012 at 4:42pm ကျေးဇူးပါပဲနော် Comment by အေးချမ်းဖြူ on August 30, 2012 at 9:29am Thank you. ‹ နောက်သို့
6. snow myat
19. zayyar naing